I-Attic eqaqambileyo nethuleyo/Iloft - 70щ - I-Airbnb
I-Attic eqaqambileyo nethuleyo/Iloft - 70щ
Igumbi lakho lokulala e i-loft sinombuki zindwendwe onguOna
Igumbi eliseluphahleni/iloft linefenitshala epheleleyo ibe kukho indawo eyaneleyo yabantu abayi-2 ukuba nihamba kunye. Uza kube usabelana ngendlu yethu entle kakhulu, eqaqambileyo nevulekileyo kumgangatho wokuqala/wesibini kunye nam nentsapho yam. Siza kukuvuyela ukwabelana ngamacebiso ethu okutyelela indawo yethu entle:)
Igumbi eliseluphahleni kumgangatho we-3r lahlukaniswe ngeendawo eziyi-2:
1.	Eyokuqala yiloft enebhedi elala abantu ababini, iwardrobe enkulu, ikhitshi elitsha eliyi-mordern (kuquka isitovu/ioveni, ifriji eluhlaza, i-microwave. njl.) kunye netafile enkulu. Indawo epheleleyo yabucala, siza kukunika isitshixo.
2.	Okwesibini yindawo engaphezu kwe-40 ene-TV, i-PC, isofa enkulu nezinye izinto ezenza uzive uthe zava, efanelekileyo ukuze uphumle. Inebhalkhoni enelanga. Le ndawo ayikho bucala ngokupheleleyo kuba ngamanye amaxesha kufuneka siyisebenzise. Nangona kunjalo, sicinga ngeendwendwe zethu ibe siyakuhlonipha ukuzola.
Kukho i-WiFi kuzo zonke iindawo.
Indlu yethu ikwidolophana encinci ebizwa ngokuba yiHostalets de Balenyà (Osona) kwindawo ehlala abantu. Sinevenkile encinci 30M kude kwaye iivenkile ezinkulu ezantsi kwilali 600M kude kube ngoku. Sisekude ngeemizuzu eziyi-50 ukusuka eBarcelona kunye nemizuzu eyi-12 ukusuka eVIC, isixeko esikhulu esilandelayo kunye nedolophu entle kakhulu kunye nemarike yesintu kunye neentlobo ezininzi zeevenkile zokutyela, iibhari kunye neevenkile. Sikwakufutshane (imizuzu eyi-20) kwindawo entle eluhlaza ekuthiwa yiParc Natural del Montseny elungele ipikniki nokuziqhelanisa nokunyuka intaba.
Sikhuthaza ukuba uqeshise ngemoto ukuze uhambe kodwa kwakhona sinezithuthi zikawonke-wonke ezifanelekileyo. Isikhululo setreyini (iRenfe) yimizuzu eyi-8 xa uhamba ngeenyawo ukusuka ekhaya kwaye kukho nebhasi (iGalés) edibene neBarcelona kunye neVIC.
Ngoko ukuba ungathanda ukuchitha ixesha kule ndawo intle upholisa umoya ococekileyo nokuzola, wamkelekile kakhulu kwindlu yethu efudumeleyo netofotofo.
Yonke iminqweno emihle,
Umbuki zindwendwe ngu- Ona
My family and I will be very pleased to have you as a guest :)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Els Hostalets de Balenyà